Shaqaalaha Gaadiidka Gawaarida Gaadiidka ' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliShaqaalaha Duulista GaadiidkaPark Dhiig ayaa ugu deeqay
30 / 11 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
shaqaalaha ulasimpark ayaa ku deeqay dhiig
Shaqaalaha Gaadiidka Gawaarida Gaadiidka; Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. shaqaalaha ayaa dhiig ugu deeqay Bisha Cas. Ku-deeqidda ugu horreysa garaashka baska ee xeebta waa dhiigga ugu horreeya ee GaadiidkaPark A.Ş. Maareeyaha Guud Salih Kumbar. Isaga oo ka hadlayey ahmiyadda uu leeyahay ku-deeqidda dhiiga, Maareeyaha Guud Kumbar wuxuu sheegay in qof walba uu yahay inuu ku deeqo dhiig isla markaana kudeeqida dhiiga ay faa iido weyn u leedahay caafimaadka aadanaha. Waxaan rajeyneynaa in dhiiga la siiyay uu yahay neefsi kuwa baahan. Waxaan ku casuumay qof walba inuu ku tabaruco dhiiga ..
45 DRIVE WAA BLOOD BLOOD
Tan iyo markii la aasaasay, 1868 waxay qabatay howlo muhiim ah si ay u fidiso hoy, nafaqo iyo daryeel caafimaad dadka saboolka ah iyo kuwa baahan. Wadar ahaan, darawalka 45 wuxuu ku deeqay dhiig. Darawalada ayaa sidoo kale muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin in isha kaliya ee dhiigu uu yahay aadanaha isla markaana dhiiga 45 ee la soo bandhigo la isticmaali doono haddii loo baahdo.
Shaqaalaha TÜDEMSAŞ waxay taageeraan ololaha dhiigga deeqda
Deeqda dhiigga ee ka timid Kayseri Gaadiidka Kizilay
Taageero buuxda oo laga helo Denizli Ulasim ilaa Ololaha Ku-deeqidda Dhiiga
Warka Wanaagsan ee Madaxwaynaha Büyükakın iyo Shaqaalaha Gaadiidka
Ololaha deeq-bixiyeyaasha dhiiggu waxay ka bilaabmaan saldhigyada tareenka
Si Deeq Dheer looga Sameeyo Dumarka Haweenka ee TCDD
Ololaha Dhiigga Dhiiga ee ka socda Shaqaalaha TCDD
Khadka Shaqaalaha EGO ee loogu talagalay Dhiiga Deeqda
Ololaha Dhiigga Dhiiga ee TÜDEMSAŞ
TÜVASAŞ Shaqaalaha Dhiigga Deeqay
Qalabka ku-deeqidda dhiiga cas ee dhiigga cas
Garaashka Baska Xeebta Xeebta
Bisha Cas ee Turkiga